TaxJar na-ewebata Emmet: Taxtụ Isi Aka Amamihe | Martech Zone
Otu n'ime ihe ịma aka ndị na-atọ ọchị nke e-azụmahịa n'oge a bụ na gọọmentị ọ bụla chọrọ ịwụ elu ma kwuo ụtụ ahịa ahịa ha iji mepụta ego ha ga-enweta maka mpaghara ha. Dị ka ọ dị taa, e nwere ihe karịrị Ikike ikike ịtụ ụtụ 14,000 na United States nwere ụdị ụtụ isi ngwaahịa 3,000.
Onye ọ bụla na-ere ejiji n'ịntanetị anaghị achọpụta na ajị anụ ha gbakwunyere na ngwaahịa ugbu a na-ekewa uwe ha dị iche iche ma na-eme ka ịzụta ihe a na-atụ ụtụ na Pennsylvania… steeti na-anaghị anakọta ụtụ isi maka uwe, ma ọ bụghị. Ma nke ahụ bụ naanị otu ihe atụ… ndepụta a na-enweghị ngwụcha nke iwu ụtụ isi na-ebute ọtụtụ nde ụzọ iji kwụọ ụgwọ ụtụ ahịa ahịa na-ezighi ezi… na nke ahụ nwere ike ịme azụmahịa gị na nsogbu.
Usoro nke ịkpado ngwaahịa gị ọ bụla site na koodu ụtụ ngwaahịa ziri ezi nwere ike iwe ọtụtụ awa ma wepụta oke nkụda mmụọ maka onye na-ejikwa ụtụ ahịa gị. Ma ọ bụghị usoro otu oge. Oge ọ bụla ị gbakwunye SKU ọhụrụ na ngwakọta ngwaahịa gị, ị ga-ahụrịrị na e depụtara ha nke ọma.
TaxJar gwuru n'ime data ahụ, ma, na-ewere na nkezi nke nyocha a niile ruo otu nkeji kwa SKU, ọ ga-ewe onye ahịa na-ere ihe dịka 3,000 SKU Oge 50 iji kee ngwaahịa ha.
Emmet: Isi Taxtụ Isi Azụmaahịa
TaxJar mepụtara Emit, ụlọ ọrụ mbụ onye nwere ọgụgụ isi ahịa tax categorization robot. Wuru n'ime ụlọ site na ndị injinia TaxJar, Emmet metụtara mmụta igwe iji chekwaa oge ndị ahịa TaxJar site na akpaghị aka na-ekewa ngwaahịa ha site na koodu ụtụ.
Kemgbe mmalite nke 2020, Emmet egosilarị ihe ịga nke ọma 90% na ịkọwa ngwaahịa ndị ahịa TaxJar n'ụzọ ziri ezi. Na Emmet, ịkọwapụta ngwaahịa 3,000 ahụ na-ewe naanị elekere ole na ole. Ma n'ihi na iji igwe na-amụ ihe na-akwado ya, Emmet na-akawanye nghọta karịa ihe ọhụụ na ngwaahịa ọ bụla ọ na-akọwa.
Emmet na-eme ka usoro nhazi ngwaahịa dị mfe, na-emeziwanye ihe ziri ezi ma na-enye ndị ahịa anyị na ndị mmekọ obi ike nke ịmara azụmaahịa ha na-akwado usoro teknụzụ ụtụ ahịa azụmaahịa kachasị mma na ahịa.
Alec Carper, TaxJar Director nke Injinia
Ka ọ dị ugbu a, Emmet na-enyere ndị ahịa TaxJar aka ịkatọ ngwaahịa nke aka ha n'ime ngwa TaxJar. N'ime ọnwa ndị na-abịanụ, Emmet ga-arụ ọrụ na ndị ahịa TaxJar ndị na-eji ụtụ isi ahịa SmartCalcs taxJar ma ọ bụ ndị na-anakọta ụtụ ahịa site na ọwa ahịa eCommerce (dị ka Amazon, Shopify, BigCommerce, wdg)
Rịọ a TaxJar ngosi
Jtụ na-enye ndi azụmahịa eCommerce aka ilekọta ụtụ isi ụtụ isi nke ire ahịa. TaxJar kpamkpam automates ahịa tax mgbawa, akuko na ịgba akwụkwọ ma na-enye usoro mmemme mmekọrịta zuru oke maka teknụzụ, ọrụ na ndị ndụmọdụ ụtụ. Na mgbakwunye na API ha, TaxJar nwere ntinye ọnụ na NetSuite, Magento, Shopify, Walmart, Amazon, BigCommerce, Ecwid, WooCommerce, Squarespace, Square, na Etsy.
Tags: aiamazonAPIBigCommerceEcwidemmetmagentonetsuiteụtụ ahịaụlọ ahịasquaresquarespaceJtụWalmartwoocommerce